Koorso Adult Masuul Ah | Barnaamijka Shahaadada tooska ah ee la shaqeynta Caruurta
Koorso Adult Masuul ah
Barnaamijka Shahaadada tooska ah ee la shaqeynta Caruurta
Toddobaadka 20 saacaddan ah ee khadka tooska ah wuxuu u oggolaanayaa dadka shaqo doonka ah inay helaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay carruurta kula shaqeeyaan xarumaha daryeelka carruurta shatiga leh ama iskuullada ku yaal BC.
Iyada oo loo marayo kulamada is-dhexgalka, Koorsada Mas'uulka ah Dadka Waaweyn ee Intarnetka ayaa ka jawaabaya fikradaha aasaasiga ah ee ku saabsan koritaanka ilmaha laga soo bilaabo dhalashada ilaa da'da 12, cunugga hanuun, caafimaadka, amniga iyo nafaqada.
Dowladda Ingiriiska ee Columbia waxay hadda amar ku siisay tababar Koorso Adult Masuuliyad leh dhammaan shaqsiyaadka la shaqeeya carruurta.
Koorsadan Mas'uulka ah Dadka Waaweyn ee tooska ah ayaa la kulma Sharciga Shatiga Bixinta Xanaanada Cunugga ee BC Shuruudaha looga baahan yahay shaqsiyaadka inay yeeshaan ugu yaraan saacadaha 20 ee tababarka daryeelka carruurta oo ay ku jiraan badbaadada, horumarka ilmaha iyo nafaqada si ay ula shaqeeyaan carruurta.
Tababbarkayaga Casharka Qaangaarka ah ee Mas'uulka ah wuxuu u qalmaa dadka shaqo doonka ah ee ku nool BC si loo helo khibradda lagama maarmaanka u ah la shaqeynta carruurta. Qaybta ugufiican ayaa ah in koorsadu iskeed u socoto. Ardayda ayaa bilaabi kara koorsada markay ku habboon yihiin, oo dhammaystira markay diyaar yihiin. Ma jiro waqti xaddidan.
Markii la siiyo lacagta, ardayda waxay helayaan emayl soo dhaweyn leh oo leh tilmaamaha gelitaanka. Ardaygu wuxuu riixi karaa isku xirka cinwaanka e-maylka si uu ugu bilaabo casharada. Waxa jira su'aalo ku celcelis ah inta lagu gudajiro koorsada oo dhan, iyo dhamaadka imtixaanno badan oo doorashada kama dambeysta ah ah. Dhammaan qaybaha koorsada ayaa lagu dhammeeyaa khadka tooska ah, mana jiraan buugaag shaqo oo dheeraad ah oo loo baahan yahay.
Kadib markay dhammeeyaan imtixaanka kama dambaysta ah, ardayda waxaa loo soo diri doonaa shahaadada dhammaystirka, taas oo loo isticmaali karo in lagu helo shaqo xarumaha daryeelka carruurta ee shatiyeysan.
Kooraskeena Waajibka ah ee Mas'uulka ah Dadka Waaweyn ee internetka sidoo kale waxaa kafaalaqaada WorkBC. Tan macnaheedu waa maalgelinta dawladda ayaa laga heli karaa xarumaha shaqada ee deegaanka si ay u qaataan koorsadan Codsadeyaashu waa inay ahaadaan shaqo raadis firfircoon oo codsadaan inay noqdaan macaamiil xaruntooda shaqada ee deegaanka. Booqo our Maalgelinta Dowlada bogga wixii faahfaahin dheeraad ah.
Koorso Adult mas'uul ah ayaa la heli karaa
in ka badan Luqadaha 100
Qaado Koorsada Mas'uulka ah Dadka Waaweyn ee tooska ah oo Luuqadda aad dooratay!
Adeegso Google Chrome Browser,
oo guji batoonka tarjumida oranji
xagga sare ee bog kasta.
Waxaad dooran kartaa inaad koorsada ku dhigto khadka tooska ah luuqada aad door bideyso.
Guji xiriiriyaha hoose si aad u Daawato Koorso Afkaaga ah
Farsi (reer Faarisi)
Koorso Koorsada Mas'uulka ah
Roxanne Penner waa milkiilaha Xarunta Wax Barashada Hore ee 4Pillar ee Powell River, BC.
Iyadu waa aqoonyahan shatiyeysan caruurnimada hore, isuduwaha aqoon isweydaarsiga iyo tababbaraha ECE.
Waxay sidoo kale u shaqeysaa sidii tabobar qoys waxayna si firfircoon uga shaqeysay sidii waalid foster ah iyada oo loo marayo Wasaaradda Caruurta iyo qoysaska muddo ka badan 17 sano.
Roxanne wuxuu barayay xirfadaha koorsada Dadka Waaweyn Masuuliyadeeda leh iyadoo loo marayo aqoon isweydaarsiga shaqsiyeed muddo ka badan 10 sano.
Hadda koorsadan waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee loogu talagalay dadka jadwalkooda ama goobta ay u oggolaan waayaan inay tababar shaqsiyan ah.
Koorsadayada Waaweyn ee Masuuliyada leh waxaa lagu qaataa khadka tooska ah taxanaha casharada leh jawaabo kooban. Koorsada ayaa gebi ahaanba iskeed isku habeysan. Ardaydu way bilaabi karaan wakhti kasta, oo waxay qaadan karaan imtixaanka ugu dambeeya markay diyaar yihiin. Dhamaadka koorsada, ardaydu waxay qaadan doonaan imtixaanka ugu dambeeya ee buugga furan ee buugga, waxaana email loogu soo diri doonaa shahaadada dhammaystirka. Calaamadda gudbista waa 70%, imtixaankana waxaa loo heli karaa inuu dib u qaato illaa dhibcaha gudbista laga gaaro.
Kaqeybgalayaashu waa inay ugu yaraan jiraan 19 sano inay isdiiwaangeliyaan, dhammeeyaan casharrada oo ay ku aflaxaan imtixaanka ugu dambeeya iyagoo leh calaamad lagu qanco si loo helo shahaadada Koorsada Dadka Waaweyn ee Masuuliyadeeda.
Fadlan la soco, macalin Roxanne Penner iskeed iskaga wacda emayl ahaan inta aad kujirto kooraska si looga jawaabo su aalo kasta oo aad qabtid.
Imtixaanka Koorsada ee Koorsada
Manaahijka Koorsada Cilmiga Dadka Waaweyn
Dadka Waaweyn ee Mas'uulka ka ah Internetka Koorsada way fududahay in la qoro oo la dhammaystiro! Bilowga ilaa dhammeysiga koorsada waa mid war badan leh oo sahlan in la raaco.
Roxanne macalin ahaan wuu fiicnaa! Waxay si dhakhso leh ugu soo noqotay e-maylkayga markastana way diyaar u ahayd inay ka jawaabto su'aalahayga markii aan helo.
Waxa aan inta badan ka jeclahay koorsada ayaa ah sida qoto dheer ay u jirtay. Waxay xitaa ka gudubtaa sida loogula shaqeeyo carruurta leh baahiyo caafimaad oo kaladuwan, kuwaas oo aan u maleynayo inay muhiim u tahay qof kasta oo gala garoonka.
Kadib markaan dhamaysto koorsada Dadka Waajibka ah ee Masuulka ah isla markaana qaadista imtixaanka waxaan dareemayaa kalsooni aan ku qabsan doono shaqadayda cusub anigoo fahmaya sida ugu wanaagsan ee loo noqon karo qof weyn oo mas'uul ah.
Kadib markuu dhammeeyo Koorsada Dadka Waaweyn Masuuliyada leh, ardaygu wuxuu uqalmaa inuu la shaqeeyo:
Daryeelka Caruurta Da'da Iskuulka (shati leh)
Xarumaha Daryeelka Caruurta mararka qaarkood (shati)
Beddelka ama ku beddelashada / beddelaad / wacitaan loogu yeero Kaaliyayaasha Waxbarashada Carruurnimada Hore ee Xarumaha Xannaanada Ilmaha ama Xanaanada.
Barnaamijyada Ku-darida Qoyska ee caadiga ah, Kaaliyeyaasha Daryeelka Ilmaha Qoyska ama jagooyinka kale ee la xiriira
Bilaabida Xarunta Xannaano-maalmeedka Qoyska
Nanny ama Ilmo-hayn
Koorsada tooska ah ee $ 125
Barashada Hore ee 4Pillar waxay ku faantaa inay bixiso Dammaanad Xilliga Xanjada ah ee 100% Koorsada Adult Adult masuuliyada leh.
Haddii sabab kastoo aadan ku faraxsanayn tababarka, waxaan kuugu soo celin doonaa si buuxda iibsashadaada.
Fadlan la soco, shahaadada dhameystirka lama soo saari doono koorsooyinka lacag celinta ah.
Imtixaanno Arday badan ah
Waxaan si aad ah ugu talinayaa Roxanne Penner inuu noqdo macalinka koorsada Adult Masuuliyada leh.
Iyadu waa macalin aad u xeel dheer oo xamaasad leh oo si cad ugu raaxeysanaya goobta ay ka shaqeyso. Waxay ahayd wax lagu farxo in lala xiriiro iyada.
Waxaan qaatay koorsada Dadka Waaweyn Masuuliyada leh oo waxaan u arkay inay tahay mid aad war u ah. Roxanne Penner waxay ka dhigtay casharada madadaalada iyo barashada iyadoo loo marayo qaabkeeda waxbarida waxay ahayd mid dabayl ah.
Waxaan aad ugula talin lahaa is qorida koorsadan.
Koorsada Internetka ee Dadka Waaweyn ee Masuulka ah waxay ahayd khibrad waxbarasho oo aad u wanaagsan. Waxaan jeclaa in Roxanne diyaar u yahay inuu ka jawaabo su aalo kasta oo aan qabo.
Waxaan helay caddeynteyda isla markii aan dhammeystay koorsada, taasoo ahayd mid waxtar leh intii aan socday codsigeyga shaqada daryeelka carruurta.